Odayaasha Muqdisho oo ku dhawaaqay xilliga loo cayimay bannaanbaxa ka dhacaya Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Odayaasha Muqdisho oo ku dhawaaqay xilliga loo cayimay bannaanbaxa ka dhacaya Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Odayaasha dhaqanka beelaha Muqdiso ayaa waqti u qabtay bannaanbax lagu waday inuu Muqdisho k adhaco oo loga horjeeday madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Farmaajo.
Kulan ay yeesheen Guddiga abaabulka Bannaanbaxa iyo odayaasha ayaa looga hadlay go’aanka laga qaadanayo bannaanbaxa oo hore loo hakiyey, waxaana la isla gartay in bannaanbaxa uu dhaco muddo bil ah kadib.
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa ku dhawaaqay arrintan, isagoo sheegay bannaanbaxa uu dhacayo 28 February 2022, haddana Doorashadda waqtigeedda bilaabatay ay eegi doonaan sida ay ku dhammaato.
Bannaanbaxa oo ay wadeen qaar ka mida taageerayasha Musharixiinta ayaa hadda u muuqada inuu meesha la baxay, markii ay ka hor yimadaeen maamulka Gobolka Banaadir ee taageersan Framaajo.
Previous articleSomali government spokesperson wounded in a suicide bomb attack
Next articleMuxuu yahay Kursiga lagu eedeeyay inuu Ra’iisal Wasaare Rooble kala wareegay Beeshii lahayd..?